आर्थिक - Sano Aawaj
breaking news 3, आर्थिक
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य विगत छ महिनादेखि निरन्तर बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएका छन् । नेपाल आयल निगमले भने मूल्यवृद्धि नभई समायोजन भएको जनाएको छ । मुुख्यतया तीनवटा प्रमुख कारणले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको निगमको दाबी छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुनुको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै हो । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ८२/८३ डलर पुगेको छ । गत वर्षको मङ्सिरमा प्रतिब्यारेल ४१ डलर थियो । एक वर्षमा दोब्बर भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिका साथै डलरको तुलनामा नेपाली रुपियाँको अवमूल्यनले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ ।” निगमका अनुसार हाल भइरहेको मूल्यवृद्धि...
१ मंसिर २०७८, बुधबार१ मंसिर २०७८, बुधबार१ मंसिर २०७८, बुधबार by sanoaawajNo Comments
तीन महिनामा टेलिकमको खुद नाफा २ अर्ब २५ करोड
Breaking news 1, breaking news 3, Nepse Update, आर्थिक, ताजा अपडेट
नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा नाफा बढाएको छ । टेलिकमका अनुसार (२०७८ असोज मसान्त) मा दुई अर्ब २५ करोड ९९ लाख ४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । कम्पनीले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यो नाफा गत वर्षको यही अवधि (२०७७ असोज मसान्त)को तुलनामा ४८.९ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष यही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो ।गत वर्षको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीको सञ्चालन आय ८ अर्ब ६३ करोड ५३ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ (अर्थात, १३.२ प्रतिशत) ले वृद्धि भई ९ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार गत आवको प्रथम त्रैमासिकको कुल आय १० अर्ब १० करोड ४४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिमा ...
अमेरिकालाई उछिन्दै चीन बन्यो संसारकै धनी देश
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पछि पार्दै छिमेकी मुलुक चीनले विश्वकै धनी मुलुक बनेको छ । कन्सल्टेन्सी फर्म म्याकिन्से एण्ड कम्पनीको ताजा रिपोर्टअनुसार पछिल्लो २० वर्षमा चीनको सम्पत्ति तीव्र गतिले बढिरहेको छ । तर अमेरिकाको सम्पत्ति भने सोही गतिले बढेको देखिँदैन । उक्त रिपोर्टअनुसार पछिल्लो दुई दशकमा विश्वभरको कुल सम्पत्ति तीन गुणाले वृद्धि भएको छ । विश्वको ६० प्रतिशत आय रहेका १० मुलुकको वासलात (ब्यालेन्स शीट) को जाँचपछि उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको जनाइएकाे छ। २० वर्षको अवधिमा वृद्धि भएको विश्वको कुल सम्पत्तिमध्ये चीनले एक-तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसरी हेर्दा सो अवधिमा चीनको कुल सम्पत्तिमा १६ गुणा वृद्धि भएको छ ।रिपोर्टअनुसार सन् २००० मा विश्वको कुल सम्पत्ति करिब १५६ ट्रिलियन डलर थियो । तर २०२० मा विश्वको कुल सम्पत्ति बढेर ५१४ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । उक्त अवधिमा वृद्धि भए...
फेरी बढ्यो हवाई भाडा, कति पुग्यो ?जानी राख्नुहोस्-
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, ताजा अपडेट, राजनीति
काठमाडौँ । इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका छन् । वायुसेवा सञ्चालकहरुको छाता सङ्गठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै हवाई भाडामा जोड्ने इन्धनको शुल्कमा अधिकतममा रु २२० वृद्धि गरिएको जनाएको छ । निगमले हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रतिलिटर रु ५ मूल्य बढाएको थियो । सोही अनुरुप वायुसेवा कम्पनीले हवाई भाडा बढाएका हुन् । यसरी बृद्धि भएको भाडादरअनुरुप अब काठमाडौँबाट सबैभन्दा लामो दूरीको धनगढी गन्तव्यका लागि रु २२० बढेको छ । सङ्घका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर हवाई इन्धनको मूल्यमा हवाई भाडा वृद्धि गरिएको छ । आजैदेखि यो भाडादर लागू गरिएको छ । काठमाडौँबाट हुने पर्वतीय उडानमा भने इन्धनमा लाग्ने शुल्क रु १७० बढेको छ । यो पनि, सर्वोच्च परिसर बाहिर प्रधानन्यायाधी...
Breaking news 1, Nepse Update, अन्तर्राष्ट्रिय, आर्थिक, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट
व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको ३ वर्षपछि बिजुली पाएको होङशी शिवम् सिमेन्ट उद्योगमा थप लगानीसहित क्षमता विस्तार गरिने भएको छ । हालको उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउन उद्योगमा रू. २० अर्बभन्दा बढी लगानी थप गर्न लागिएको हो । यसअघि उद्योगमा रू. ३६ अर्ब लगानी भइसकेको छ । २०७५ जेठदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको उद्योगले हालसम्म डिजेलको प्रयोगबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको थियो । उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शनिवार रातिदेखि ३० मेगावाट (मेवा) विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । नवलपरासीको सर्दीस्थित उद्योगबाट अहिले दैनिक ६ हजार मेट्रिकटन सिमेन्ट उत्पादन हुँदै आएको छ । उद्योगले दोस्रो चरणमा प्रतिदिन ६ हजार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न लगानी थप्न लागेको हो । कुल १२ हजार उत्पादन क्षमताको उद्योगले लगानी थपेपछि उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनेछ ।...
२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार२६ कार्तिक २०७८, शुक्रबार by sanoaawajNo Comments
मुख्य र ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुँदै आएका जीपको भाडादर निर्धारण
आर्थिक, ताजा अपडेट
बाजुरा जिल्लाका मुख्य र ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुँदै आएका जीपको भाडादर निर्धारण गरिएको छ । जीप व्यवसायीहरुले यात्रुबाट बढी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि जीप व्यवसायीहरुको छलफलपछि भाडादर निर्धारण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । यहाँका साँफे–मार्तडी राजमार्ग, मार्तडी–कोल्टी, कोल्टी–कर्णाली करिडारेमा सञ्चालन हुँदै आएका जीपको भाडादर कायम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न सडकमा चल्ने जीपले यात्रुबाट चर्काे भाडा असुल्ने गरेको जनगुसो बढेपछि जीप व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेर भाडादर निर्धारण गरिएको हो । यहाँका पूर्वी तथा उत्तरी भेगका कोल्टी–मार्तडी सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनको प्रति किलोमिटर रु १८ का दरले रु ७५० भाडा तोकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकार...
१५ कार्तिक २०७८, सोमबार१५ कार्तिक २०७८, सोमबार१५ कार्तिक २०७८, सोमबार by sanoaawajNo Comments
आजको राशिफल, हेर्नुहोस् यी राशिको भाग्य चम्किदै
आर्थिक, खेलकुद, रोचक खबर
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) अधुरा कार्यहरु सुचारुगर्न समयले बिशेष साथ दिनेछ । पुराना लगानि उठाउन उत्तम समय रहेकोछ । प्रतिश्पर्दा जन्यकार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनेछ । देशबिदेशको यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । भोगबिलासिताका साधनहरुमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहला । बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) गरीरहेको कार्य परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । अध्यन अध्यनमा समय मध्यम रहेता पनि मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । आटँ शाहसको कमि भएको महसुस रहनेछ । आम्दानिको तुलनामा अधिक खर्चहुनाले मनमा सामान्य तनाबको सामना गर्नुपर्नेछ । मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा बिशेष जिम्बेवारी बहन गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । भुमी तथा वाहनका क्षेत्रमा सामान्य...
८ कार्तिक २०७८, सोमबार८ कार्तिक २०७८, सोमबार८ कार्तिक २०७८, सोमबार by sanoaawajNo Comments
Breaking news 2, breaking news 3, Nepse Update, आर्थिक, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट
काठमाडौं : प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार करिब ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिकतर्फ ८ खर्ब १ अर्ब (४६.३४ प्रतिशत) र बाह्यतर्फ ९ खर्ब २७ अर्ब (५३.६६ प्रतिशत) छ। यसको भाग लगाउँदा हरेक नागरिकको भागमा ५६ हजार ६ सय ८३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनसंख्या ३ करोड ५ लाख २ हजार ५ सय ८५ पुगेको छ। भूकम्पपछि ऋणको ग्राफ बढेको देखिएको छ। ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिए पनि उद्देश्यअनुसार खर्च हुन नसकेको विज्ञ बताउँछन्। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल समयमै आयोजना नसकिँदा देशकै प्रतिष्ठामा आघात पर्न थालेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘आयोजना समयमै नसकिँदा ऋण पाउन समस्या हुन्छ।’ खनालका अनुसार चाँडै सम्पन्न गरे बढी पैसा आउँछ। खर्च गर्न नसके नयाँ ऋण स्वीकृति हुन समस्या ह...
रामराम हेर्दै डरलाग्ने यो कस्तो खालको रोग लाग्यो
Breaking news 1, Nepse Update, आर्थिक, ट्रेन्डिङ, व्यक्तित्व
ताप्लेजुङ जिल्लाको मैयाखोला १ मा चन्द्रकला तामाङ बस्दै आएकि छिन्।उमेरको हिसाबमा पनि मात्रै २७ बर्ष लागेकि चन्द्रकलाको एकदमै दयनिय अवस्था छ । सामान्य मान्छे भन्दा निकै नै भिन्न आकारको देखिन्छिन् उनी ।भगवानले पनि गरिबलाई नै झनझन दुख थप्दिदै जादोरहेछ । चन्द्रकलाको शरिरभरि नै ठुला ठुला फोकाहरु छन् अझ खुट्टामा भने एकदमै ठूलो मा`सुको थुप्रो नै झुन्डिएको छ ।सामान्य हिड्न त सक्छिन् उनी तर पहिलेको जस्तो र सामान्य मान्छेको जस्तो चहि बिल्कुलै सक्दिनन् ।उनका शरिरमा भएका फोकाहरु आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि बढिनै रहेका छन् । बिडम्बना त केछ भने आफ्नो आर्थिक अवस्था एकदमै न्यून लगभक शून्य बराबर भैरहदा आखिर यस्तो रोग के हो सम्म थाहा हुन सकेन ,राम्रो डाक्टरलाई देखाउनसम्म सकिएन् । आखिर पैसा भएमात्रै न उपचार पाइने रहेछ ।आजको यश शृङ्खलामा तिनै चन्द्रकलाको पिडादायिक...
२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार२२ आश्विन २०७८, शुक्रबार by sanoaawajNo Comments
Breaking news 1, Breaking news 2, आर्थिक, ट्रेन्डिङ, ताजा अपडेट
२२ असोज, सिन्धुपाल्चोक। कृषि सामग्री कम्पनी लिमीटेडले चीनबाट झिकाएको ४० हजार मेट्रिकटन रसायनिक मल पैठारी हुन सकेको छैन । हिउँदे बालीका लागि झिकाइएको ३५ हजार मेट्रिकटन युरिया र पाँचहजार मेट्रिकटन डीएपीसहित ४० हजार मेट्रिकटन रसायनिक मल पठाउन चिनीयाँ पक्षले तत्परता नदेखाएकाले रोकिएको मलका ठेकेदार सिल्क ट्रान्स्पोर्ट प्रालिका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बताए । समयमा मल उपलब्ध हुन नसक्दा किसानले हैरानी व्यहोर्दैै आएकाले यसपाली समयमै मल झिकाउन लागिएको थियो । चीनबाट भिकाइएको मल चाँडै नै नेपाल पठाउन प्रधान मन्त्रीसमेतले चिनीयाँ दुतावासलाई आग्रह गर्दा पनि सहजीकरण नगरेपछि हैरानी खेप्नुपरेको अध्यक्ष शेर्पाले आरोप लगाए । रसायनिक मललाई प्राथमिकता दिई व्यापारिक सामानलाई पनि चाँडै पठाउन चिनीयाँ पक्षलाई आग्रह गरिएको थियो । त्यसैगरी दैनिक २० गाडी मात्र पठाउन आग्रह गरे प...